राप्तीका गौरव अमृतमान | के. एल. पीडित | Saugat : Naya Yougbodh
पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा राप्तीका प्रतिभाहरुको उपस्थिति निकै शानदार बन्दै गएको छ । केही होनहार युवाहरुले राप्तीको चलचित्र क्षेत्रलाई निकै समृद्ध बनाउँदै लगेका छन् । त्यस्ता प्रतिभाशाली युवाहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छन् अमृतमान वली ।
करिब पाँच वर्ष काठमाडौंमा चलचित्र निर्माण सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सीप हासिल गरी फर्केका अमृत दाङमा निर्देशन विधामा सक्रिय रहेका छन् । अभिनय र सम्पादनमा पनि उनको दक्षता राम्रै छ । तर पनि उनको रुचिको विधा निर्देशन नै हो । ‘मलाई निर्देशन विधा नै मन पर्छ । म यसै विधामा स्थापित हुन चाहन्छु ।’ निर्देशक अमृतले आफ्नो लक्ष्य बताए ।
बुवा गुमान वली र आमा पवित्रा वलीको कोखबाट रोल्पाको राँक– ६ हिलेमा जन्मेका निर्देशक अमृतमानको सानैदेखि कला क्षेत्रप्रति रुचि थियो । गाउँघरमा उनी नाटक प्रदर्शन गर्थे । अभिनय देखेर अरुहरुले पनि उनलाई कलाकारिता गर्न हौस्याउँथे । ‘गाउँमा नाटक देखाइन्थ्यो । मेरो अभिनय सबैले मन पराउँथे । सबैले कलाकार बन्नुपर्छ भन्थे । बिस्तारै ममा पनि कलाप्रति अभिरुचि बढ्दै गयो ।’ अमृतले राज खोले ।
चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने आकांक्षा बोकेर अमृतमान २०६५ मा काठमाडौं हानिएका थिए । संयोगवश उनले निर्देशक रमेश कुमार राईसँग काम सिक्ने अवसर पाए । निर्देशक राइसँग करिब ३ वर्ष जति चलचित्र निर्देशन सम्बन्धी ज्ञान सीप हासिल गरे । काठमाडौं रहँदा उनले चलचित्र क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरुसँग काम गर्ने अवसर पाए । निर्देशक शिव रेग्मी, दयाराम दहाल, भद्र भुजेलजस्ता हस्तीहरुको सहायकको रुपमा उनले धेरै चलचित्रहरुमा काम गरे । यसले उनलाई चलचित्र क्षेत्रलाई नजिकबाट सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने अवसर दिलायो । उनले करिब ३० जति चलचित्रहरुमा मुख्य सहायक निर्देशक भई काम गरे ।
अहिले अमृतमान दाङमा छन् र चलचित्र निर्माण कार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नयाँ नयाँ प्रतिभाहरुलाई मञ्च प्रदान गर्नुका साथै कलाको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सि.एन. मिडिया र एओन मुभी मेकर्समा आवद्ध रहेका अमृतले दाङबाटै मेरो कथा र पलपलको साथी चलचित्रको निर्देशन गरेका छन् । उनले करिब १ दर्जन जति म्यूजिक भिडियो पनि निर्देशन गरेका छन् ।
प्राविधिक ज्ञान भएपछि मोफसलबाटै राष्ट्रियरुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने अमृतको ठहर छ । उनी भन्छन् ‘अब दाङमै पनि धेरै गर्न सकिन्छ । हामीले निर्माण गरेका चलचित्रलाई पनि राष्ट्रियरुपमै प्रतिष्पर्धामा उतार्न सकिन्छ ।’
निर्देशक अमृतमानले निर्देशन गरेका म्युजिक भिडियोहरुले अहिले युट्युबमा निकै चर्चा पाइरहेका छन् । केही भिडियोहरु नेपाल टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यसले उनको कार्यक्षमता प्रष्ट्याउँछ । निष्ठाभावका साथ कला क्षेत्रमा समर्पित अमृतमान राप्तीका एक गौरव हुन् ।